Ukwakhiwa kwamafu weCirrus nezinhlobo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kusukela kwaqala, umcabango womuntu uzame, futhi usaqhubeka nokwenza njalo, ukubumba amafu, ukubona abalingiswa abavela ezindabeni noma ezinganekwaneni esibhakabhakeni. I- i-cirrus Luhlobo lwamafu olwenza kube lula kakhulu kithina, ngoba sibabona cishe unyaka wonke, ngakho-ke kungashiwo ukuthi bahamba nathi empilweni yethu yansuku zonke.
Manje, zakhiwa kanjani futhi yiziphi izinhlobo ezikhona? Thola.
Amafu weCirrus, noma awaziwa kangcono njenge-cirrus ngeSpanish, awuhlobo lwefu lelo siqukethe amakristalu eqhwa, ngoba zisezingeni lokushisa le- 40 degrees ngaphansi kuka-zero. Zibonakala ezindaweni eziphakeme kakhulu, eziphakathi kwamakhilomitha ayisishiyagalombili kuya kwayi-8, ukuze indiza, lapho ibawela ibakhubaze kalula, kuyilapho abagibeli bebekezelela isiyaluyalu esincane. Kepha naphezu kwakho konke, bangamafu anelukuluku lokwazi, kahle zibamba ukushisa, kepha futhi zibonisa ukukhanya kwelanga.
Uma uzibona esibhakabhakeni, ikakhulukazi uma kusehlobo futhi kube yisikhathi eside kungekho nethonsi elilodwa, sekuyisikhathi sokujabula: imvamisa uphawu lwesistimu engaphambili, noma ngisho nesiphepho. Kepha uma ubona ukuthi kunezingqimba ezinkulu ... hlala kude, ngoba lezi zakhiwo zihambisana neziphepho.
Kunezinhlobo eziningana ze-cirrus, njenge:
Njengoba sishilo, yilolo hlobo lwamafu ongakhathali ukuwabona. Bamukela ubujamo obuhle kakhulu, ekufanele ukuthwebula ngekhamera. Futhi bamema ingqondo ukuthi iphazamise futhi inqamule, into engalimazi nakancane ngezikhathi ezithile, akunjalo? 😉
Ucabangani ngamafu we-cirrus? Ngabe ziyakukhumbuza kwesinye isikhathi ngokuthile - okungokoqobo noma okuqanjiwe - okubonile kuthelevishini, ezincwadini noma kumamagazini?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu » Amafu weCirrus, anelukuluku lokumbalwa